HORDHACYO: West Ham vs Arsenal, Brighton vs Liverpool & Chelsea vs Newcastle – Shaxda Macquuulka Ah, Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyada & Ganaaxyada Iyo Rikoodhada Kulamoodii Hore – Cadalool.com
HORDHACYO: West Ham vs Arsenal, Brighton vs Liverpool & Chelsea vs Newcastle – Shaxda Macquuulka Ah, Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyada & Ganaaxyada Iyo Rikoodhada Kulamoodii Hore
Kaddib toddobaad uu hakad galay horyaalka Premier League oo la ciyaarayey tartanka FA Cup, waxay kooxuhu maanta oo Sabti ah, Axadda iyo Isniinta isku arki doonaan kulamada 22aad, waxaana halkiisii ka bilaabmi doona tartanka kaalmaha ugu sarreeya, kuwa gunta hoose fadhiya ee casaanka ka ordaya iyo kaalmaha dhexe.
Kooxda Arsenal ayaa kulanka ugu soo horreeya la ciyaari doonta West Ham United oo ay magaalada London ka wada dhisan yihiin, waxaanay u dagaallami doontaa inay guul keento si ay ugu soo dhowaato Chelsea oo booska afraad ay ku hirdamayaan, laakiin ay ka dambayso saddex dhibcood.
Waxa iyaduna laba guul-darro oo isku xiga kaddib guul-raadin doonta Liverpool oo marti u noqonaysa Brighton, laakiin Chelsea oo xattaa haddii ay khasaarto aan ka degi doonin booska afraad ayaa Newcastle United garoonkeeda Stamford Bridge kusoo dhoweyn doonta.
KULANKA West Ham vs Arsenal
West Ham United ayaa ka walaacsan sidiii ay u xejisan lahayd weeraryahanka Marko Arnautovic oo laga doonayo waddanka China, waxaana uu xiddigan reer Austria doonayaa in kooxdiisu aqbasho dalab £35 milyan ah oo loo soo gudbiyey, laakiin haddii ay fasaxdo waxa dhibaato ku noqonaysa inay kusii negaato booska kaalinta 10aad ee kala sarraynta horyaaalka ee ay hadda ku jirto.
Kooxdan uu tababaraha u yahay Manuel Pellegrini waxay 21 ciyaarood oo horyaalka ah guuleysatay siddeed kulan, sagaalna waa laga badiyey, halka ay afarta soo hadhayna ay barbar-dhac gashay.
Dhinaca Arsenal, waxa uu tababare Unai Emery ka ordayaa inuu wax guul-darro ah soo hooyo kulankan, sababtoo ah, waxa booska shanaad kala bixi karta Manchester United oo Tottenham marti u noqonaysa, haddana ay saddex dhibcood u dhexeeyaan.
Arsenal waxay dhibaato ka haysataa khadka dambe ee difaaca, 14-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Premier League ay yeelatayna hal kulan oo kaliya ayay garoonka ka baxday iyadoo shabaqeedu nadiif yahay, waxaanay ahayd ciyaartii Huddersfield Town oo bil ka hor dhacday, waxaana dhibteeda sii caddaynaysa inay tahay kooxda afraad ee goolashii ugu badnaa laga dhaliyey horyaalka.
Weerarka Gunners wuxuu ahaa mid wanaagsan oo ugu yaraan hal gool dhalinayey ciyaar kasta wixii ka dambeeyey ciyaartii Manchester City, kulanka maantana nasasho weyn ayay usoo qaateen maadaama uu tababare Emery fadhiisiyey xiddigihiisa afka hore kulankii FA Cup ee ay Blackpool ku garaaceen Sabtidii.
Tartanka: Premier League, kulanka 22aad.
Waqtiga: 3:30pm (Saacadda Geeska Afrika)
Wararkii u dambeeyey ee dhaawacyada iyo ganaaxyada labada kooxood
Arsenal ayaa war farxad leh ka heshay xaaladda lix ka mid ah xiddigaha dhaawaca kaga maqnaa ee madax xanuunka ku riday tababare Emery.
Hector Bellerin, Laurent Koscielny, Konstantinos Mavropanos, Shkodran Mustafi iyo Nacho Monreal ayaa dhamaantood kusoo laabtay garoomada oo diyaaar u ah ciyaaartan. Waxa isaguna soo laabtay xiddiga khadka dhexe ee Mestu Ozil oo dhaawac jilibka ah ka cabanayey, waxaana suurtogal ah in siddeed isbeddel ama sagaal isbeddel uu tababaruhu ku sameeyo kooxdii uu kula ciyaaray Blackpool Sabtidii.
Kooxda martida loo yahay ee West Ham, waxa diyaar ah laacibka doonaya inuu kooxda iskaga tago ee Arnautovic oo kulankii Birmingham garoonka la saaray 20 daqiiqadood oo kaliya markii ay ciyaartu socotay, isla markaana kaga jawaabay cadho, laakiin tababarihiisu uu tibaaxay inuu uga baqay inuu sii kordho dhaawac ka gaadhay dhabarka.
Janiver Hernandez oo dhaawac ka cabanaya ayaa isaguna fursad u helay inuu soo laabto, laakiin waxa la filayaa in tababaruhu ka door bido Andy Carrol oo dhaliyey ay kaga adkaadeen Birmingham. Sidoo kale, waxa uu Carrol yahay khatar ay waajahdo Arsena, waxaana labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee uu kaga hor tegay uu ka dhaliyey afar gool, kuwaas oo ay ku jiraan saddexley uu April 2016 ka dhaliyey.
Pellegrini wuxuu haystaa liis dhaawacyo ah oo muddo jiifaya, kuwaas oo ay ku jiraan Andriy Yarmolenko, Carlos Sanchez, Fabian Balbuena, Winston Reid, Ryan Fredericks, Manuel Lanzini iyo Jack Wilshere, waxaase fursad uu siin karaa oo diyaar ah Samir Nasri oo hore ugu ciyaari jiray Arsenal toddobaadkii horena lagu soo bandhigay garoonka London Stadium.
Kooxda ay West Ham kala kulanto guul-darrooyinka ugu badan waa Arsenal, waxaanay khasaartay 29 ka mid ah 45 ciyaarood oo ay iskaga hor yimaaddeen Premier League.
23-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee dhamaan tartamada ee ay West Ham ka hor tagtay Arsenal, kaliya hal kulan ayay guul u damaashaadday.
Guji 2 si aad u wada akhrisato